भारत विश्वकपबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले गरे भाबुक ट्वीट !
काठमाडौं, २६ असार । आईसीसी विश्कप क्रिकेट अन्तर्गत बुधबार सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनलमा न्यूजिल्याण्डसँग भारत पराजित भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी असन्तुष्ट देखिएका छन् । तथापी भारतीय खेलाडीको प्रदर्शनलाई लिएर भने सन्तुष्ट देखिएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘एक निराशाजनक परिणाम ! तर अन्तिमसम्म भारतले गरेको प्रदर्शन देखेर खुःशी लाग्यो । यस टुर्नामेन्टभरी भारतले उत्कृष्ट ब्याटिङ र बलिङ गर्यो यसमा मलाई गर्व छ । हार जित जीवनको एक भाग हो । भविष्यको लागि टिमलाई हार्दिक बधाई !’
धेरैले आशा गरेका कप्तान विराट कोहली, रोहीत शर्मा र के एल राहुल समान १–१ रन बनाएर आउट हुनु नै भारतको हारको प्रमुख कारण बन्यो ।
केहीले भारतले हार्नुमा पूर्व कप्तान महेन्द्रसिंह धोनीको धिमा गतिलाई समेत हेरेका छन् । किनकी भारतले ९२ रनमा ६ विकेट गुमाउँदा रवीन्द्र जडेजा र धोनी मैदानमा थिए । उनले ७२ बलकाे सामना गर्दा ५० रन मात्र बनाए ।
त्यसैगरी भारतीय टिमका पूर्व कप्तान सौरव गांगुली र भिभिएस लक्ष्मणसहित पूर्व क्रिकेटरहरुले सातौं नम्बरमा धोनीलाई मैदानमा पठाउनु पनि हारको कारण रहेको बताएका छन् ।
न्यूजिल्याण्डसँग पराजित भएसँगै भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीले न्यूजिल्याण्डको किफायती बलिङको तारिफ गरे ।
उनले भने शुरुवाती ४०–४५ मिनेटमा नै खेल बदलिएको बताएका छन् । उनले भारतले प्रतियोगिताभर निकै नै राम्रो खेल प्रदर्शन गरेको जनाएका छन् । उनले भने, – हामी हारबाट निराश छौं, तर, आत्मविश्वास हल्लिएको छैन ।